गौतमबुद्ध बिमानस्थलको फ्लाइटका लागि आइपुगे प्राविधिक, यी देशबाट नियमित उडान हुने ! - ramechhapkhabar.com
गौतमबुद्ध बिमानस्थलको फ्लाइटका लागि आइपुगे प्राविधिक, यी देशबाट नियमित उडान हुने !
निर्माण सम्पन्न गर्ने क्रममा रहेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्यालिब्रेसन फ्लाइटका लागि एरोथाई कम्पनी थाइल्याण्डका प्राविधिक आइपुगेका छन् ।
क्यालिब्रेसन फ्लाइटका लागि गत वैशाखदेखि नै तयार रहेको विमानस्थल कोभिडको जोखिमका कारण प्राविधिक आउन नसक्दा समय पछि सर्दै आएको थियो ।
विमानस्थलको आईसिबी टु अन्तर्गतको कम्युनिकेशन, न्याभिगेशन सिष्टम साथै उपकरण जडानको ठेक्का पाएको थाइल्याण्डको एरोथाई कम्पनीले क्यालिब्रेसन फ्लाइटका लागि प्राविधिकसहित जहाज ल्याउनु पर्नेमा थाई सरकारले आफना नागरिकलाई बाह्य मुलुकमा गई काम गर्न अनुमति दिएको थिएन । त्यही कारणले गर्दा क्यालिब्रेसन फ्लाइट हुन सकेको थिएन ।
थाइल्याण्डबाट आउने अवस्था नदेखेपछि भारतबाट बोलाउने तयारी गर्दागर्दै एरोथाइले नै क्यालिब्रेसन फ्लाईट गर्ने भएपछि त्यसको तयारीमा नागरिक उड्यन प्राधिकरण र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना जुटेको र नागरिक उड्यन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्रीले बताए ।
गौतमबुद्ध विमानस्थल आईसिबी टुका प्रमुख इन्जिनियर प्रवीण न्यौपानेले शनिबार थाइल्याण्डबाट एक मुख्य प्राविधिक आइपुगेको बताए । “उपकरण जडान गरेको लामो समय भइसकेकाले पनि क्यालिब्रेसन फ्लाइट गर्नुअघि उपकरण परीक्षण जरुरी छ,” न्यौपानेले भने ।
“अब मौसमले साथ दिए यसै महिना भित्रै नत्र डिसेम्बर पहिलो सातासम्म क्यालिब्रेसन फ्लाइट सम्पन्न हुनेछ,” उनले भने । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पूर्वसम्झौता अनुरूप एरो थाईलाई क्लालिब्रेसन फ्लाइट गर्न अनुमति दिएको हो । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको गौतमबुद्ध विमानस्थल क्यालिब्रेसन फ्लाइटका लागि ७ महिना अघिदेखि नै तयारी अवस्थामा थियो ।